Faniry Ernaivo Noroahina tsy ho mpitsara intsony
Noroahin’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) tsy ho mpitsara intsony ny Filohan’ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) teo aloha Fanirisoa Ernaivo ny 7 novambra teo.
Antony nanenjehana azy ny kabary nataony tetsy Mahamasina ny 30 oktobra 2018, fony izy kandida filoham-pirenena nitarika hetsika niarahana tamina kandida maromaro. Misy matetika ny sakana ataon’ny mpitandro filaminana rehefa ohatr’ireny, ka nahatonga azy nampiaka-peo toa nanome rariny ny raharaha fitsaram-bahoaka nahafaty polisy miisa 3 sy nanozona polisy. Anisan’ny nitory azy ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka. Naaton’ny minisiteran’ny fitsarana notarihin’ny minisitra Harimisa Noro Vololona tamin’ny asany mandritra ny enim-bolana izy fotoana fohy taorian’io, mandra-pisian’ny fanapahan-kevitra raikitra. Manoloana io, nambarany fa ny 8 novambra lasa teo no fotoana nampanantsoana azy, saingy naroso ny 7 novambra, izany hoe tsy teo ny tenany tamin’ny fiakarana filankevi-pifehezana (CODIS). Nisy ny fanitsakitsahana ny zon’ny fiarovana satria tsy navela niaro tena akory aho, hoy izy. Tsy voahaja ihany koa ny tsiambaratelon’ny fanapahan-kevitra satria tsy nahazo fampahafantarana (notification) akory hoe noroahina tsy ho mpitsara, fa « compte fake » tany amin’ny facebook no nanaparitaka izany, izay vao nanontany ny CSM. Nambarany fa tsy ara-dalàna io fanapahan-kevitra io ary misy ambadika politika, ary nisy nanome loharanom-baovao taminy ihany koa fa nomena baiko hanao fanangonan-tsonia (pétition) ny depiote IRD nangatahana ny fandroahana azy. Niaraka tamin’ny “intention” hanao “petition” hanalana ny PM Ntsay Christian io, hoy hatrany ny fanazavana. Misy fifanitsaham-pahefana izany ? Ny minisitry ny fitsarana no namoaka fanapahan-kevitra hampiato ahy amin’ny asako sy ny tombontsoako. Rehefa tsy niakatra CODIS aho anatin’ny enim-bolana nivoahan’io ny minisitra io, dia foana ilay ny fanapahan-kevitra. Miverina amin’ny asako aho, hoy i Fanirisoa Ernaivo. Milaza ny hanao fampiakarana (recours) ity mpitsara ity. Tsiahivina fa nanohana an’i Marc Ravalomanana izy tamin’ny fifidianana filoha fihodinana faharoa. Vao tsy ela ihany koa no nitondra kiana mivaivay amin’ny raharaha Ambohitrimanjaka sy ny fananganana Tanà-masoandro. Misy ifandraisany ve ireo ? Io izany ny fanapahan-kevitra mikasika an’i Fanirisoa Ernaivo fa mba aiza ny tohin’ny raharaha maro, toy ny famotsoran’ny mpitsara an’i Manantena Hajanirina nosamborina noho ny raharaha Kidnapping, izay olon’ny antoko MAPAR notazonina tany Toamasina saingy navotsotra ?
Hanao valandresaka eny amin’ny Fitsarana Tampony Anosy ny filohan’ny SMM Clément Jaona anio amin’ny 10ora maraina ka andrasana izay ambarany, ary heverina fa horesahany ny momba io raharaha Faniry Ernaivo io.